बलिउड अभिनेत्री पायल घोषमाथि मुम्बइमा एसिड आक्रमणको प्रयास - टि. एल. एन पोस्ट
Home फिल्म बलिउड बलिउड अभिनेत्री पायल घोषमाथि मुम्बइमा एसिड आक्रमणको प्रयास
बलिउड अभिनेत्री पायल घोषले आफूमाथि एसिड आक्रमणको प्रयास भएको र आफू मुस्किलले बचेको बताएकी छिन् । सामाजिक संजालमार्फत एक भिडियो जारी गर्दै पायलले केही व्यक्तिहरुले आफूमाथि एसिड तथा रडले आक्रमण गर्ने कोसिस गरेको बताएकी छन् । पायलका अनुसार उनी आफ्नो घर मुम्बइ जाँदै गर्दा कारमा चढ्न लागेका बेला केही मानिसहरुले उनीमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस गरेका थिए ।
ती मानिसहरुले उनीसँग भएका सामान लुट्ने प्रयास गरेका थिए । पायलका अनुसार उनीहरुसँग एउटा बोतल थियो । त्यसमा एसिड भएको पायलले बताएकी छिन् । उनका अनुसार आक्रमणकारीहरुले मास्क लगाएका थिए । उनीहरुले पायलको टाउको र हातमा हिर्काउने प्रयास गरे । त्यसपछि पायलले सहयोगको लागि चिच्याउन थालेपछि ती व्यक्तिहरु भागे ।
पायलले सामाजिक संजालमा आफ्नो चोटसहित पोस्ट पनि शेयर गरेकी छिन् । पायलसँग यो घटना मुम्बइको अंधेरी क्षेत्रमा भएको थियो । पायलका अनुसार ती आक्रमणकारीहरुले आक्रमण गर्दा रडले उनको बायाँ हातमा लागेको छ । यसअघि पायल त्यतिबेला चर्चामा आएकी थिइन् जतिबेला उनले अनुराग कश्यपमाथि यौन शोषणको आरोप लगाएकी थिइन् ।
Previous articleश्रीमान दुवईमा, नेपालमा कोठामा भेटियो श्रीमतीको शव
Next articleसंखुवासभा सामूहिक हत्यामा यसरी बनेको थियो योजना
पल र रेश्मा ‘क्या मज्जा आको’ भन्दै नाँच्दै
खाली पेटमा चिया पिउने गल्ती नगरौं , हुन्छ यस्तो समस्या